Amiirada Afrikaanka ah ee Majaajilada Dalxiis Ku Soo Kordhay Magaalada Jacaylka Walaalaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Amiirada Afrikaanka ah ee Majaajilada Dalxiis Ku Soo Kordhay Magaalada Jacaylka Walaalaha
Dalxiiska majaajilada ee Afrikaanka ah (APCTour) ayaa sii weynaada sannad kasta marka majaajilada ugu fiican ee Afrikaanka ah ee ka soo jeeda adduunka oo dhan ay soo degaan si ay u bixiyaan bandhigyo majaajillo heersare ah oo dalka oo dhan ah. APCTour waxay sii wadaa qabsashadii Xeebta Bari ee SA Café & Lounge ee Philadelphia, PENNSYLVANIA Oktoobar 23-keedii, 2021. Bandhigga ciriiriga ah wuxuu cinwaan uga dhigay jaadad kala duwan oo ah majaajilaystayaasha heerka sare Uncle Azeez, Fresh Prince of Africa, Mr. Sirleafson, Cee Y, King Drewwsky, Ofili, Lesley, Setoiyo, iyo Dr. Lucas; Magacyada sida aadka ah loogu yaqaan majaajilada iyo muusigga qoyska- saaxiibtinimo ee DJ Mezie.
Amiirrada Afrikaanka ah ee Majaajilada Dalxiiska ayaa leh dhammaan, oo leh isku dhafka xiisaha leh ee majaajilada abaal-marinnada lagu guuleysto ee dareenka internetka, iyagoo ka wada shaqeynaya inay bixiyaan bandhig majaajillo ah oo heersare ah. Bandhigu wuxuu xaqiijinayaa habeen qosolka dabka degdega ah, oo uu martigeliyay aasaasaha APC iyo majaajiliistaha Foxy P, oo loo yaqaanay waxqabadkiisa daanka-dhicis iyo isdhexgalka dadka. Bandhiggu wuxuu ka buuxaan bandhigyo qosol badan oo aan kala joogsi lahayn oo ku habboon dhadhanka majaajilada ee qof walba.
Safarku wuxuu ku wajahan yahay Xeebta Bari, ka dib markii uu ku guulaystay waxqabadkii Koonfurta iyo Koonfur -bari.
The African Princes of Comedy Tour (APCTour) waxaa aasaasay 2013 majaajiliiste Foxy P si uu uga faa'iidaysto hibada wadareed ee majaajilaystayaasha Afrika ee fadhigoodu yahay qurbaha. Iyada oo 115 joogsi ku taal guud ahaan Mareykanka, UK iyo Kanada, kooxdu waxay gaartay 32 majaajiliiste, oo ay taageeraan 5.2 milyan oo raacsan baraha bulshada. Waxay ku soo bandhigeen magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin Hollywood CA, New York City, Houston TX, iyo Washington DC. Waxay kaloo ku soo bandhigeen kulliyado sharaf leh oo ay ka mid yihiin Princeton, Yale, New York University iyo Harvard.